Rikoooo.com - 767 LANDING ISSUE
EGO NA-EKWU 767
Mbido akwụkwọ a na-agụghị • 5 posts • Peeji 1 of 1
Jikọtara: 10 Julaị 2018, 02:30
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by mikmcc » 29 Sept 2019, 19:55
ya na ltu b-767 maka fsx. mgbe a na - emetụ wiiliti aka, m na - ewepụta injin na - arụ ọrụ, na - eme mkpọtụ, ụgbọ elu ga - ebili ọzọ. m ji n’aka na m na-eme ihe adịghị mma, mana nke a bụ ụgbọ elu nke nwere okwu a. ndị ọzọ niile na-anọdụ ala. hwlp obula? daalụ.
Jikọtara: 04 Ọkt 2017, 03:29
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by StonewallUSMC » 06 Ọkt 2019, 03:00
Isi okwu bụ nke a. Mgbe na emetụ aka pịa F2. Nke a bụ akụ azụ. Ọzọkwa na ntinye aka na 0. I nweghị ike ịtụ anya ụgbọ elu agaghị ebuli ka ị na-agbada ọsọ ọsọ karịa nke a. A na-eji ntụgharị azu aga ejikwa ojiji breeki opekata mpe. Bịarute na mpempe edobere edobere n’oge ọ bụla ga-eme bulie. Mgbe eburula ụfọdụ ụgbọelu anaghị eji flaps n'ihi na flaps na-akwatu imi ala, na ndị ọzọ karịa braking isi na kwesịrị ekwesị ịgbado ọkụ flaps ekwesịghị iji n'elu rute nso ime ka ọsọ ngwa ngwa. Na ntụgharị tụgharịrị nke mbụ, mgbata nke mbụ na-amalite ịtụgharị tụgharịa, mgbata nke abụọ na-eweta moto na-enweghị isi.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by mikmcc » 22 Ọkt 2019, 01:32
N'elu mmetụ, etinye m igwe na idlr, wee f2 maka ịtụgharị. nke na-arụrụ m ụgbọ elu ọ bụla. ọsọ ala mbu na 767 a bu ihe ndi 160. nke ọma n'okpuru ọsọ ọsọ were were nke 175 +
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by StonewallUSMC » 22 Ọkt 2019, 01:49
Ihe dị mkpa ị ga-echeta bụ na takeoff flaps ma ọ bụ na flaps ma ọ bụrụ na ogo, dị ka ụfọdụ flaps na-adịghị eji na takeoff, n'akuku nke ụgbọ elu wdg anaghị eme ka ị nweta kọntaktị zuru ezu. Ihe atụ nke enweghị flaps bụ ihe na-adọkpụ ụda ọdụ ọdụ kachasị elu dị ka P47 Thundrrbolt. Ruo ọtụtụ flaps noses ụgbọ elu niile dị ka flaps nwere ọnọdụ dị omimi nke enwere ike ịhụta ka ọ rutere n’ụbọchị ihu igwe doro anya, ị ga-ahụ ịhie ụzọ n’azụ flap.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by StonewallUSMC » 22 Ọkt 2019, 01:50
Ihe dị mkpa ị ga-echeta bụ na takeoff flaps ma ọ bụ na flaps ma ọ bụrụ na ogo, dị ka ụfọdụ flaps na-adịghị eji na takeoff, n'akuku nke ụgbọ elu wdg anaghị eme ka ị nweta kọntaktị zuru ezu. Ihe atụ nke enweghị flaps bụ ihe na-adọkpụ ụda ọdụ ọdụ kachasị elu dị ka P47 Thundrrbolt. Ruo ọtụtụ flaps na-echekwa ụgbọ elu niile dị ka flaps nwere ihe dị egwu na-emegharị anya nke enwere ike ịhụta ka ọ rutere na ụbọchị iru mmiri doro anya, ị ga-ahụ ikpuru pọpụ na azụ nke flap.
5 posts • Peeji 1 of 1